के तपाईलाई गाजरको हलुवा मनपर्छ ? त्यसाे हो भने अब घरमै पनि यसरी बनाउन सकिन्छ – Makalukhabar.com
के तपाईलाई गाजरको हलुवा मनपर्छ ? त्यसाे हो भने अब घरमै पनि यसरी बनाउन सकिन्छ
काठमाडौं, फागुन ९ । हलुवा धेरै प्रकारका हुन्छन् । नेपाली भान्सामा प्रायः सुजीकै हलुवा पाक्ने गरेको छ । गाजरको हलुवा भने कमै पाक्छ । गाजरको हलुवा स्वस्थ र स्वादिलो परिकारमा पर्छ । यसलाई पहिले भारतीय परिकारको रूपमा लिइन्थ्यो । तर, नेपालमा पनि यो परिकार अहिले निकै रुचाइएको पाइन्छ । नेपालका प्रायः पार्टी हल, होटेल र रेस्टुरेन्टमा गाजरको हलुवा पाइन्छ । तर, इच्छा भए घरकै भान्सामा पनि यो परिकार तयार गर्न गाह्रो हुँदैन ।